Netnaija Apk Download Ho an'ny Android [2022 Movie App]
Ianao ve mpitia fialamboly ary tia mahita ny zava-drehetra momba ny indostria? Raha misy ianao, dia eto miaraka amin'ny fampiharana izahay, izay fantatra amin'ny hoe Netnaija Apk. Izy io dia rindranasa Android, izay manome ny fampahalalana rehetra ary koa manome sarimihetsika, horonan-tsary ary mozika.
Araka ny fantatrao fa ny indostrian'ny fialamboly dia lehibe lavitra noho ny hafa rehetra. Misy mpilalao, mpitendry mozika ary ekipa mpiasa an-tapitrisany maro hafa, miaraka mampiseho zava-mahatalanjona izy rehetra. Noho izany, misy fampahalalana an-taonina momba azy ireo ary ny olona koa tia mijery ny toetrany ankafiziny.
Noho izany, noho ny indostria lehibe, misy fampahalalana marobe momba, izay azon'ny olona idirana avy amin'ny tranonkala samihafa. Iray amin'ireo olana ny fahazoana vaovao ary ny olana hafa dia ny fitadiavana sarimihetsika maimaim-poana. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra hamahana ny olanao rehetra momba ny fialamboly.
Ity fampiharana Android ity, izay ahafahanao miditra amin'ny fampahalalana marobe ao anatin'izany ny fialamboly. Misy lafin-javatra maro kokoa amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay aminareo rehetra. Ka te-hijery momba izany rehetra izany ve ianao? Raha te hanao izany ianao dia andao atao.
Topimaso momba an'i Netnaija apk
Izy io dia fampiharana fialamboly Android, izay sehatra lehibe indrindra amin'ny fialamboly. Manolotra vaovao momba ny indostria rehetra izy io. Mba hidirana amin'ny rindrambaiko ity dia mila mamorona kaonty fotsiny ireo mpampiasa. Mila mamorona kaonty fotsiny ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka ary miditra maimaim-poana amin'ireo fiasa rehetra.
Misy vaovao samy hafa momba ny olo-malaza, fa ny olona dia te-hahazo ny vaovao haingana araka izay azo atao. Noho izany, miaraka amin'ny Netnaija App amin'ny fitaovana Android-nao, afaka miditra amin'ny vaovao farany rehetra momba ny olo-malaza ianao. Izy io koa dia manome vaovao sy fiantraikany hafa amin'ny indostria.
Ny fanatanjahan-tena dia ampahany manan-danja amin'ny fialamboly. Misy mpankafy an-tapitrisany, saingy matetika ny olona samihafa no tia karazana toerana samihafa. Noho izany, amin'ny alàlan'ity fampiharana ity, ny mpampiasa dia afaka mahazo mora foana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny sehatry ny fanatanjahantena.
Moa ve ianao tia mozika taloha? Raha liana amin'ny karazana mozika hafa ianao dia tsy dia zava-dehibe izany. Ity fampiharana ity dia manolotra fanangonana mozika be dia be, izay ahitana jazz, Nizeriana, Filazantsara, Blues, sy ny maro hafa. Afaka manana mozika iray ianao, amin'ny alàlan'ny fidirana azy fotsiny.
Raha tianao ny fialam-boly hita maso, toy ny horonan-tsary na sarimihetsika, dia aza manahy. ny Movie App dia manome famoriam-bola be dia be ihany koa, izay ahitana Comedy, Mozika, teknolojia, Vaovao, sy ny maro hafa. Misy ihany koa ireo horonan-tsary rehetra ireo.
Netnaija Movie App koa dia manome tahirin-tsarimihetsika betsaka ihany koa, izay azon'ny mpampiasa alefa ary alefany maimaim-poana ihany koa. Misy sokajy samihafa misy, izay manolotra atiny hafa arakaraka ny fizarana lehibe. Ny sarimihetsika Netnaija Yoruba dia iray amin'ireo faritra midadasika amin'ity fampiharana ity. Manome sarimihetsika Nollywood sy indostrialy hafa koa izy io.
Misy ihany koa ny rafitra fifandraisana, izay ahafahan'ny mpampiasa mifandray mora amin'ny tompon'andraikitra. Afaka mangataka sarimihetsika mora foana ny mpampiasa, amin'ny alàlan'ny fifandraisana. Misy endri-javatra mahagaga an-taonany maro amin'ity fampiharana ity, izay azonao jerena amin'ity fampiharana ity.
Noho izany, misy endri-javatra marobe, saingy misy olana tokana amin'ity fampiharana ity. Ny fampiharana dia misy dokam-barotra, izay mety hahasosotra anao. Saingy tsy maintsy mandalo doka vitsivitsy ianao mba hahazoana ny fialamboly hafa rehetra.
Size 27.98 MB
Anaran'ny fonosana com.netnaija
Manome fanangonana mozika, horonan-tsary ary sarimihetsika goavambe
Votoatiny azo sintonina
Mora ny mahita atiny misy
Ho misintona ny rakitra Apk?
Izahay dia hizara rohy aminao, izay ahafahanao misintona soa aman-tsara ny rakitra Apk. Noho izany, ampidino eto amin'ity pejy ity ilay rakitra Apk, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fampidinana azo atao etsy ambony sy ambany. Paompy tokana dia ampy hanombohana misintona.
Netnaija Apk no fampiharana tsara indrindra amin'ny karazana mpitia fialamboly. Azonao atao ny mahita ny karazana serivisy fialamboly amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazo fidirana amin'ny fialamboly tsy voafetra.
Raha manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hofaranay haingana araka izay azo atao ny olanao rehetra. Azonao atao koa ny mifandray amin'ireo tompon'andraikitra mba hahazo fanampiana. Aza mitsahatra mitsidika ny tranokalanay ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Movie App, Netnaija Apk, Netnaija App, Netnaija Movie App Post Fikarohana
9Lottery Apk Download Ho an'ny Android [Play & Earn 2022]
Hot Hit App Download Ho an'ny Android [2022 Movie App]